Wasiirada A. dibada Soomaaliya oo ugu baaqday Golaha Ammaanka in la qaado cunaqabateynta hubka – idalenews.com
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya ahna Wasiirada Arrimaha dibada Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ugu baaqday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey in la qaado xayiraada hubka ee saaran Soomaaliya, iyadoo Goluhu uu shir albaabada u xirnaa uu yeeshay.
Fowziyo Yuusuf ayaa ka codsaday Golaha Ammaanka in la qaado cunoqabateynta, si ay ciidamada dowladda loo dhiso, isla markaana u hantaan ammaanka dalka.
Wasiirada Arrimaha Dibada ayaa sidoo kale sheegtay in Golaha ammaanka ay weydiisteen in la kordhiyo mudada howl galka AMISOM oo ku eg bisha Marso, iyadoo rajo weyn ka muujisay in la qaadan doono codsigooda.
Golaha Ammaanka ayaa fadhi isugu imaanaya bisha Marso, kaasoo ah muddo kordhin ay u sameynayaan howl galka AMISOM oo dhamaadkii sanadkii hore ay ku kordhiyeen saddex bilood.
Sidoo kale Wasiirada Arrimaha dibada ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabo in la qaado cunaqabateynta hubka, waxaana ay xaqiijisay in Goluhu uu gaari doono go’aan la xiriira sidii uu uga jawaabi lahaa codsiga dowladda.
Dhinaca kale Wasiirada ayaa sheegtay in aanay waxba kala socono eedeynta Kooxda Monitoring Group ka soo baxday oo ku saabsan in Iiraan ay hub siiso Al-Shabaab, iyadoo Safiirka Iiraan u fadhiya Qaramada Midoobey uu beeniyay warbixintaas.
Golaha Ammaanka ayaa laga sugayaa inay cod u qaadaan sidii cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya looga qaadi lahaa, inkastoo soo jeedin ka soo baxeysa xubnaha joogtada ka ah Golaha ay ku baaqayaan in aan si dhameystiran loo qaadin cunoqabateynta.